သင့်ရဲ့ Solutions တကယ်ပဲ 100% ရေရှည်တည်တံ့မ Are - အဘယ်ကြောင့်နည်း
သင်ဒီမှာပါ: Home / အဆိုပါအယ်ဒီတာကနေစကားများ / အယ်ဒီတာ့အာဘော် / သင့်ရဲ့ Solutions တကယ်ပဲ 100% ရေရှည်တည်တံ့မ Are - အဘယ်ကြောင့်နည်း
16 / 04 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon 1 မှတ်ချက်
My မစ်ရှင်, I mean the mission I gave to myself, is to collect eco-friendly solutions to heal, fix and improve our Planet Earth. This directory isanever ending quest to search, find, retrieve and classify the best solutions around the world for our Blue Planet!. As you can see, I classified them by type of solutions. so you can easily find one that fit your situation. This directory ဟန်ဆောင် to be as eco-friendly as possible! I say XCHARXpretendsXCHARX because, as we are not living inaperfect world, these solutions are not always 100% sustainable.
အမှတ်သရုပျဖျောဖို့, အတူတူကဤ2လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြေရှင်းချက်ကိုမြင်ရပါစေ!
2 အဆိုပါ Zai နည်းစနစ်နှင့်အတူကုန်းစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး
micro တစ်ကိုကာကိုလာဦးထုပ်နှင့်အတူဓာတ်မြေသြဇာ dozing
အဆိုပါ Zai နည်းစနစ်နှင့်အတူကုန်းစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး
re-စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက်xaï technique ကိုအတူခြောက်သွေ့သောမြေများ
ဒီနည်းပညာ 100% Eco-ဖော်ရွေသည်။ ဒါဟာအာဖရိကမှလာနှင့်ရှင်းလင်းသောမြေယာပြန်လည်ရှင်သန်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့သုံးခဲ့တဲ့အလွန်ဟောင်းနွမ်း technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလွန်းအသေးစိတ်ကိုပေးခြင်းမရှိပါကဒီ technique ကိုလယ်ထွန်စက် optional ကို, လက်အလုပ်သမားတွေအများကြီးကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါစို့။ သငျသညျတှငျးကိုတူးနှင့်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူသူတို့ကိုဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ အားလုံးမှာအဘယ်သူမျှမဓာတုပစ္စည်း! ဟုတ်ကဲ့! သဘာဝက Rhymes ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်တို့ကိုသည်းခံခြင်းလိုအပ်မည်! ထိုအဟုတ်ကဲ့! ခြောက်သွေ့သောမြေများပြန်လည်ရှင်သန်ရန်ဤဖြေရှင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်သကဲ့သို့ရေရှည်တည်တံ့ပါ! တစ်ဦးမဟုတ်သောစုံလင်သောကမ်ဘာပျေါတှငျတစ်ဦးကနီးပါးစုံလင်သောဖြေရှင်းချက်!
Filed under: အယ်ဒီတာ့အာဘော်